UDisemba 2017 -IiRadiyo zenethiwekhi
Ikhaya / 2017 / EtiMnga
ezaposwa ngomhla Disemba 30, 2017
Inrico TM-7 njengesikhululo seAPRS esiphathwayo
Faka nje nayiphi na iapps yeAPRS enjengeAPRSDroid kwaye unesitishi esimnandi seAPRS, uxela indawo okuyo maxa onke. Inkqubo ye- Inrico TM-7 Ngaphandle kwamathandabuzo, unomathotholo womnatha ophambili!
Umfanekiso ngoKarl Hobson ovela kwiQela likaFacebook IiRadiyo zenethiwekhi.
ezaposwa ngomhla Disemba 28, 2017
IiRadiyo zeNethiwekhi zam endizithandayo ezivela kwi-2017
Ndizamile iirediyo ezininzi zenethiwekhi. Ukuza kuthi ga ngoku, i Inrico TM-7 kwaye i I-Talkpod N58 lukhetho lwam oluphezulu! Ndinoluvo lokuba kwi-2018, iiradiyo zenethiwekhi ziya kuba lolona hlobo lukhulu lwerediyo engahlawulwayo! Kwaye yeyiphi oyithandayo?
The Inrico TM-7 iphumelele umbono wayo omtsha weselfowuni. Ingcamango elula ecacileyo ecacileyo isihogo somqondo! Yomelele kwaye iyilwe kakuhle. Ndimele ndivuyisane U-Inrico Ukuphefumlelwa kwabo!
The I-Talkpod N58 ikhutshwe ngeentsuku zokugqibela zonyaka kwaye sele ndiqinisekile nge-100%. Okokuqala, inoyilo lwangoku. Okwesibini, umgangatho weaudiyo wenza i-Yaesu okanye i-Icom iphantse ibe neentloni. Ndiyathandabuza ukuba i-Motorola izakuvakala ngcono kunale Talkpod. Yikhumbule into yokuba oonomathotholo bajolise kwimakethi yobungcali. Iinkcukacha, uyilo, yonke into yakhiwe ngeenkcukacha ezinomdla kunye nezinto ezikumgangatho ophezulu. Ayisiyo radio ephantsi phaya, kodwa kufanelekile ngepesenti enye!
Ndonwabile kakhulu yile mbono intsha, kwaye kum, unokuhlala ulindele uthando lwam kulo msebenzi kunye nokuzinikela kwam kunye nemizamo emihle yokukunika inkxaso ebalaseleyo. Enkosi ngako konke ukuthemba kwakho kulo nyaka umangalisayo!
Ndikunqwenelela uNyaka oMtsha onwabileyo ozalisekisiweyo ngempilo, uthando kunye nemali- ukuthenga ezinye iiradiyo
73 de i-CT1EIZ
ezaposwa ngomhla Disemba 28, 2017 Disemba 28, 2017
I-Talkpod N58. Yise naphina.
ITalkpod N58 entsha sele ibhengeziwe kwaye sele ilibali eliyimpumelelo. Myalelo weyunithi yakho namhlanje ukusuka network-radios.com or mzibazem.shop -Lapha kuphela apho uya kufumana inkqubo ye-Android evulwe ngokupheleleyo, ene-ROM eyenziweyo elungiselelwe ii -apps ze-ham, ezinje nge-Echolink, TeamSpeak 3, Zello, njl.
ezaposwa ngomhla Disemba 27, 2017 Disemba 27, 2017
Irediyo engahlawulwayo, Akohlulwanga
ezaposwa ngomhla Disemba 26, 2017 January 23, 2018
Ukuseta iyunithi yovavanyo yeTalkpod N58
Namhlanje, ndifumene eyam I-Talkpod N58 Icandelo lovavanyo. Ndonwabe kakhulu kukufumana izandla zam ndaza ndaqala ukuhlola unomathotholo.
Iqela lam elivela eTalkpod lenze nje uvavanyo olukhawulezileyo ngaphambi kokulithumela kum kwaye ndilibale ukutshintsha ulwimi, ndiye ndafumana unomathotholo ngesiTshayina.
Njengoko ndingasiqondi isiTshayina, kwakunzima kum ukufumana imenyu elungileyo yokutshintsha useto lubuyele esiNgesini. Nangona kunjalo, ndikufumanise kulula ukwenza ukuseta kwakhona kumzi-mveliso, endikwenzileyo.
Iingxaki zaqala. (Bendilindele kubo-le yunithi yovavanyo)
Isixhobo asinakubhalisa kumsebenzisi we-GSM. Ndingabakhangela, ndibone uluhlu lwabasebenza, kodwa andinakho ukubhalisa, ke oku akubanga yingxaki kwimodyuli yerediyo. I-SIM khadi ifakwe kakuhle kwislot kwaye yamkelwa yinkqubo yokusebenza. Andikwazi ukubhalisa. Ndinombono wokujonga i-IMEI. Cofa nje 06 # kunye ne-BANG! "ayaziwa IMEI". Ukuseta kwakhona umzi-mveliso kususwe kancinci kakhulu, ndiyaqikelela.
Njengoko bendingenayo ikopi enzima ye-IMEI yam yoqobo ndigqibe kwelokuba ndihlaziye isixhobo nge-IMEI yefowuni endala ebendinayo, ingasasebenzi. Unako kwakhona ukuvelisa i-IMEI entsha kwi lewebhu. Nantsi inkqubo (esebenzayo nasiphi na isixhobo se-android):
1. Cofa * # * # 3646633 # * # * (Oku kuya kungena kwimenyu yenkonzo)
2. Ngoku, cofa ku “Ukudibanisa".
3. Ngoku jonga “Ulwazi lweCDS”Kwaye ucofe kuyo.
4. Emva koko, phuma "Ulwazi ngerediyo"
5. Cofa ku “Ifowuni 1".
6. Faka i-IMEI ngolu hlobo lulandelayo: KWI-EGMR = 1,7, "YAKHO_IXESHA"
Qaphela 1: buyisela YAKHO_IXESHA nge-IMEI yakho yokwenyani
Qaphela 2: phakathi kwe-AT kunye no "+" kufuneka kubekho isithuba kwaye i-IMEI kufuneka ibe phakathi kweekowuti.
Qaphela 3: ukuba uneSIM ezimbini kwaye ufuna ukutshintsha i-IMEI # 2 ke lo myalelo ngu: KWI-EGMR = 1,10, "YAKHO_IXESHA"
Wakuba uthunyelwe umyalelo, ndiye ndayiqala kwakhona irediyo. (Kwimeko yeTalkpod, ngokususa ibhetri)
Nje ukuba iibhutsi zikanomathotholo, ndifumane umyalezo wemposiso olandelayo rhoqo emva komzuzwana omnye: "Ngelishwa inkqubo com.android.phone iyekile". Ukuyekisa, kufuneka sicime i-cache yefowuni.
Ukwenza oko, kuye kwafuneka ndiye Useto / iiNkqubo / Zonke / Ifowuni / Idatha ecacileyo kwaye, ekugqibeleni, yiya ku Useto / Umhla kwaye Khubaza iZowuni eZenzekelayo.
Kwaye ukuqala kwakhona. (susa ibhetri)
Emva kokuqalisa, ndingajonga ukuba i-IMEI yam iyasebenza, kwaye iyasebenza, kwaye unomathotholo ubhaliswe kwangoko kwinethiwekhi.
Emva koko, ndizamile ukongeza iakhawunti yam kaGoogle ukuze ndikhuphele iQela eliThetha i3, iZello kunye nazo zonke ezinye iiapps endizithandayo.
Andikwazi. Nanini na xa ndizama ukongeza iakhawunti yam, ndifumana umyalezo othi kukho ingxaki yokuqhagamshela kwiinkonzo zikaGoogle. Ndizamile isikhangeli esifakelweyo kwaye ndingangena kwiwebhu, ngenxa yoko bekungekho ngxaki kunxibelelwano lwe-intanethi. Ndaye ndafaka ingxelo yokugqibela yeGoogle Play ngqo kwi Apha.
Kwaye ekugqibeleni, konke kusebenza kakuhle! Ukudlala ngeeyunithi zovavanyo kulungile, kuba uyakwazi ukubeka izandla zakho kuqala, kodwa ngamanye amaxesha ufumana umsebenzi owongezelelweyo wokubenza basebenze ngendlela othanda ngayo. Ewe, umntu kufuneka enze umsebenzi ongcolileyo, ke abathengi baya kuba nokusebenza kakuhle ngaphandle kwebhokisi… kwiimeko ezininzi! 🙂
ezaposwa ngomhla Disemba 26, 2017 Disemba 26, 2017
Ingxoxo yeTalkpod N58 kunye nokujonga kwakhona
Ndonwabe nyani yile radio intsha yenethiwekhi: I-Talkpod N58
Ndiyamangaliswa kukukhwaza, ndiyathetha, I-LOOOOUD kunye nesandi esicacileyo sesandisi-lizwi sayo. Kubathandi be-IRN kunye neZello, le yeyona radio ingummangaliso. Isebenzisa uqhagamshelo lwe-3G okanye iWiFi, inkqubo ihamba ngokukhawuleza ngokwaneleyo, kwaye ingena kakuhle esandleni sakho. Inobungakanani obufanelekileyo, ubunzima obulungileyo kwaye andinakuyeka ukuthi intle kangakanani.
Ndiyathemba ukuba uyayonwabela le vidiyo ingezantsi.
Ukuba ufuna ukungena kwezinye izinto ezifihliweyo, jonga oku inqaku.
ezaposwa ngomhla Disemba 26, 2017 Matshi 10, 2018
I-firmware yangoku ye-RT4
Nantsi i-firmware yomzi-mveliso yakutshanje ye Irediyo-Tone RT4. Ilungisa ingxaki ngokubalwa kwexesha lebhetri.
Isilumkiso: I-RT4 iya kuthatha imizuzu embalwa ukuqala kwakhona emva kohlaziyo.
Khuphela i-firmware Apha.
ezaposwa ngomhla Disemba 24, 2017 Disemba 29, 2017
Inrico TM-7 socket pinout (mic) ngu-OK8NWO
Inrico TM-7 isocket pinout (mic) ngu-OK8NWO
Njengoko ndiqhuba kodwa ndingayithandi intambo egobileyo ndaye ndagqiba kwelokuba ndizame ukwenza isikhombisi ngemic condenser endinokuyishiya ikwindawo edibeneyo.
Ndongeze utshintsho lwe-tx kodwa eneneni njengoko ndisebenzisa iqhosha le-btooth tx elingafunekiyo kodwa ndiyifakile nangayiphi na indlela.
I-Pinouts 1 Gnd 2 yeaudio kwi7 Tx
Oku kusebenza ubuncinci eZello.
I-Maby sele unayo i-pinout kodwa uyayiva intambo yam ye-hatchet yemoto. Ndisebenzise ucingo lwe-ethernet apho ndiza kubeka khona i-rack / ikholamu kunye ne-mic ejongene nam kwivili.
Ndisebenzise isokethi ye-rj45 esecaleni kwaye ndincamathelisa imic kwaye nditshintshela kuyo.
Ngokunokwenzeka kukho indlela entle yokwenza oku kodwa iyasebenza.
Ndijongile ukuqhubekeka phakathi kwezikhonkwane 1 & 7 kwaye xa kubonelelwa ngemic "keys" kukho ukungahambelani kwe1kohm. Oku kunokuba nomcimbi ke ndicebisa ukuba wenze okufanayo ukuba wenza intambo enje.
Ndiye ndenza isokethi yesibini ye-RJ45 ngesidibanisi esongeziweyo ukusuka kwipini 7 ukuswitsha. Emva koko yongeze imicos condenser mic kwaye isebenza kakuhle.
ezaposwa ngomhla Disemba 24, 2017
Isipho sikanomathotholo ngeKrisimesi
Kutheni ungabuzi iSanta ngeyona radio inomnatha kwi-IRN? Inkqubo ye- I-Talkpod N58 iyafumaneka ngoku ukuthunyelwa. Yiba ngowokuqala ukuba ngowakho!
Yakha eyakho iGobox
Ham Radio EMCOMM Yiya Kit
Kunyaka ophelileyo ndibeke ndawonye iikiti ze-VHF / UHF kunye ne-HF. Ngelixa kusetyenzwa, akukho nanye kwezi ebinakho ukubanakho okanye yomelele njengoko ekugqibeleni bendifuna ikiti yam yokuhamba ibekhona. Injongo yam entsha yayikukwakha isikhululo sendawo enye ebhokisini eyayingenabunzima okanye inzima.
Ukuba ujonga ujikeleze i-intanethi uza kubona abantu abaninzi besakha iikiti zokuya kwiindawo zokubeka. Ndihlala ndikuthanda ukuzinza kunye nokumodareyitha kolu hlobo lwetyala, kodwa hayi uninzi. Uninzi lwabakhi basinika ubungakanani obupheleleyo beyunithi yeeyunithi ezi-6, ezingadibaniyo (malunga ne-24″ isikwere kunye ne-13 ″ ubude) okanye ukukhanya (ngaphezulu kwe-18lbs). Emva kokuvavanya izixhobo ebendiceba ukuzisebenzisa kwikhithi ndiye ndabona ukuba andidingi kwanto enzulu. Sebenzisa imeko engekho nzulu kundisindisa i-8 ″ yobunzulu kwaye kusike ubunzima ngokunjalo. Ndabeka izixhobo zamalungiselelo e-CAD kwaye ndafumanisa ukuba ukuba ndiyigcinile i-kit ngaphandle kweebhonbones (akukho mitha ye-SWR okanye ii-antenna tuners zangaphandle, isithethi esinye sangaphandle kuphela) Bendidinga. Icandelo elingu-6 elingenantsingiselo ndilisebenzisileyo ngama-4 ″ x 4 ″ x 22.4 ″ kwaye inobunzima be-16.2lbs.
Ifilosofi yoyilo ngokubanzi yale projekthi yayikukuba zonke izixhobo zibekwe ezishelfini ezimbini (enye isezantsi enye ngasentla). Emva kovavanyo lwam kwi-CAD ndafumanisa ukuba ubume bombutho obufezekileyo bufezekisiwe ngombane, ukuhanjiswa kwamandla, kunye ne-HF transceiver efakwe emazantsi. Njengenxalenye yenkqubo yokuhambisa umbane bendifuna ukubandakanya iswitshi samandla esigciniweyo esizenzekelayo. Oku kuvumela inkqubo yamandla ukuba itshintshe ngaphandle komthungo kumbane we-AC eludongeni / wenkunkuma kumandla ebhetri. Ngelixa kungeyomfuneko, eli linqaku elihle ukuba ubenalo kuba kuthintela irediyo yakho ukuba ingacimi ngelixa usebenza ukuba kukho ukuphazamiseka kwamandla (okunokwenzeka ngokulula kwimeko kaxakeka nakwintsimi).
Oku kushiye i-VHF / UHF transceiver, isithethi, kunye neeSignaLinks ezimbini kwishelufa ephezulu. Ii-SignaLinks zahlulwe sisithethi ukwahlula ngokulula ukuba yeyiphi iyunithi eqhagamshelwe kwirediyo. Ndihambile ndinonxibelelwano oluninzi lwedijithali kuba ngelixa ndingasayi kudlulisela kuzo zombini i-V / U kunye ne-HF ngaxeshanye, kunokuba luncedo kakhulu ukubanakho ukubeka esweni zombini ngaxeshanye okanye ukubeka esweni enye ngelixa uhambisa kwelinye. Ukuba neeyunithi ezimbini kundivumela ukuba ndingaze ndikhathazeke ngokutshintsha irediyo kunye ne-SignaLink ye-wiring yokusebenza kwibhanti endiyifunayo.
Ukwenzela ukuba kube lula ukwenza iikhabhathi phakathi kweSignaLinks kunye nelaptop yam ndigqibe kwelokuba ndisebenzise i-USB hub kwaye ndenze ukuba ihabhu ye-USB ifikeleleke ngasemva kwetyala. Oku kwenza ukuba kube lula xa usentsimini kuba andifanelanga ukufikelela kwimeko yokuplaga kwiintambo zonxibelelwano. Ukongezwa kwesitya sokumisa esingasemva kwandinika indawo yokukhupha uqhagamshelo lwe-antenna ye-V / U yokufikelela ngokulula ngokunjalo.
Ndigqibe kwelokuba isithethi esinye sangaphandle siya kwanela ngokusekwe kulwakhiwo endihleli kulo. Kolu lwakhiwo kukho isixa esifanelekileyo sendawo engezantsi kwesithethi serediyo ye-V / U ukuvumela ukuphuma kwesandi ngokwaneleyo. Irediyo ye-HF, nangona kunjalo, inendawo encinci ngaphezulu kwesithethi sayo esinyusiweyo. Olunye uqwalaselo endilwenzileyo yayikukuba umsindo we-FM kwi-V / U ucoceke kakhulu, ngakumbi xa kuthelekiswa nesandi se-SSB kwi-HF. Ngokusekwe koku ndikhethe ukusebenzisa isithethi ngonomathotholo weHF.
Ityala - I-SKB 1SKB-R4S 4U I-Roto Rack engaphantsi
1U, 10.5, Shel iishelfu nzulu
1U Iphaneli yokuNqamla
12V ukuya 5V Converter Module
Ukunikezwa Amandla - IPowerwerx SS-30DV
Utshintsho lwamandla okuGcina / ukuhambisa Ilahleko ephantsi PWRgate (KI0BK)
Umthengisi weHF - I-Yaesu FT-450D
I-VHF / i-UHF iTransceiver- I-Kenwood TM-V71A
Ujongano lwedijithali- Tigertronics SignaLink USB
Ukunikezelwa kwamandla kwePowerwerx kufanelekile kwiikiti zokuhamba. Icwecwe kakhulu (6 ″ x 5 ″ x 2 ″), ine-Anderson ipowerpole yokudibanisa ngaphambili (ukongeza kwiitheminali ngasemva), kwaye inokukhuseleka nge izibiyeli ezixhonyiweyo.
I-Yaesu 450D ibonelela nge-bang-for-buck yakho eninzi kwaye iyahambelana kwaye ilula kwaye (9lbs). I-tuner ye-eriyali eyakhelwe-ngaphakathi ayinalo uluhlu olubanzi kakhulu (3: 1), kodwa andicwangcisi ukuyisebenzisa ngee-eriyali ezingezizo ezomeleleyo ngoko ke kufuneka ibe ngaphezulu kokwaneleyo. Ukwenza ukusetyenziswa kwetonela kwangaphakathi kuye kwandivumela ukuba nditshabalalise i-tuner yangaphandle kuyilo, esisesinye sezizathu eziphambili zokuba ndikwazi ukulinganisa yonke into ngaphakathi kwityala le-4. I-450D inyuswe kusetyenziswa 2.5 ack isibiyeli sentsimbi Kunye nezikere zoomatshini be-M4 kunye ne-1/8-i-nylon spacers ukuthintela izibiyeli ekuzihlikihleni ngokuchasene nendawo evaliweyo yerediyo. Ekuqaleni bendizimisele ukusebenzisa intaba yokuhamba kukaYaesu kwi450D, nangona kunjalo, ithathe indawo eninzi kwaye ibinokuchaphazela ubume bam. Eli lungiselelo liphakamisa irediyo malunga ne-1/2 ″ eshelufini ekufuneka inikeze umoya omninzi.
Kwizicwangciso zokuqala ndandicwangcise ukusebenzisa iRadiyo yeNtaba eNtshona PWRgate kwaye Rigrunner yokutshintsha amandla kunye nokusasazwa kwamandla. Esi sicwangciso singqineke singenakusebenza ngenxa yothintelo lwendawo, nangona kunjalo, ndifumene indawo efanelekileyo kwiLahleko ePhantsi ye-PWRgate. Imalunga nesiqingatha sobukhulu besinye isitshixo samandla sogcino kwaye ibonelela ngeemveliso zombane ezi-3 eziphelisa isidingo seRigrunner okanye enye ibhloko yokuhambisa. Ngelixa i-LLPG ilinganiselwe i-25 amps vs ii-amps ezingama-40 zenye iyunithi, oku kufanelekile ukuba kube kukwanele kwiinjongo zam. I-LLPG ilula kakhulu kwaye inyuselwe kusetyenziswa umthwalo onzima wentambo.
I-Kenwood V71A inyuselwe kusetyenziswa isibiyeli esonyukayo seselfowuni. Isiguquli sevolthi yehabhu ye-USB yayijijekile eshalofini isebenzisa iithebhu zayo ezinyukayo. Esinye isixhobo ngasentla ishelfu inyuswe kusetyenziswa i-velcro enzima (i-SignaLinks, ihabhu ye-USB) okanye itape enamathelayo (isithethi). Ndongeze imitya yerabha emazantsi esithethi kuba ndifumene kulungiso lovavanyo lokuba imvume phakathi kwesithethi kunye nerediyo ye-HF yayimalunga ne-1/8 ″ kwaye andifuni kuqhakamshelwa phakathi kwabo xa imeko ishukunyisiwe.
Icandelo lokususa iRigrunner kulwakhiwo lwam kwakuthetha ukuba kufuneka ndibonelele ngokukhusela umbane kunye noonomathotholo. Oku kwenziwa kusetyenziswa abanini fuse abangaphakathi emgceni kwifom yefomathi yeATC. Ndikwanesixa esifanelekileyo sokujongana nerediyo kunye neentambo ze-USB zokulawula. Iishelufa endizikhethileyo zivaliwe ezenza ukuba zilungele ukusebenzisa ii-wire ties ukukhusela yonke into ekhoyo. Ndifuna ukwenza ikiti yokuhamba ngokuthe tye kangangoko kunokwenzeka ukudibanisa kunye nokudibanisa. Inxalenye yale njongo yayikukunciphisa umtya wokubopha iintambo kwiishelufa ezizodwa. Oku kuthetha ukuba ukuba ndifuna ukususa ishelufu, ndifuna ukunqamla intambo ezimbalwa ezidityaniswe phakathi kwezi shelufa zimbini (amandla amabini, isithethi esinye somsindo, iSignaLink enye), emva koko ukhulule ishelfu kwaye uyikhuphe. Akukho ukuzisika kweentambo zocingo eziyimfuneko.
Ndifuna ngokwenene ukukwazi ukubeka ii-microphones zerediyo ngaphakathi kwekiti yokuhamba kwaye ndafumanisa ukuba ndingayivula imicu yerediyo ye-V / U kwenye yeebrokhethi zeradiyo ye-HF kunye nentambo yemakrofoni iya kulunga kakuhle phakathi konikezelo lwamandla kunye ne-HF unomathotholo. Oku kulunge ngakumbi kuba imakrofoni jack ikwisimo esenza ukuba uyinqamle kancinci entlungwini.
Imicrosoft yerediyo ye-HF ibekelwe i-velcro kunye nomtya ngaphakathi ngaphakathi kwesiciko secala langaphambili. Isiciko sinobunzulu obaneleyo ukuba i-mic inokulingana ngaphandle kokunxibelelana nomphambili wombane. Intambo yombane ye-AC yombane icinyiwe kusetyenziswa indlela yokubopha efanayo njenge-mic ye-HF, ngaphandle kokuba ikwicala lecala elingasemva.
Inxalenye yenjongo yokusebenzisa ityala elincinci lokunciphisa yayikukunciphisa ubunzima kunye nobuninzi. Ndiqikelele ukuba ndingayakha ikiti yokuhamba kwaye ndigcine ubunzima kwi-35lbs. Ekugqibeleni ikiti inobunzima obungama-40.5lbs. Ndicinga ukuba isifundo endisithathileyo kule yocingo kunye nokufaka izixhobo zekhompyuter kudibanisa ukuya kubunzima obungaphezulu kunokuba unokuqonda.
Ikhithi icace gca kuseto. Nje ukuba iziciko zicinyiwe ndiyeke ukhulula ii-microphone kunye nentambo yombane. Emva koko ndinokucofa amandla e-AC okanye ibhetri, ndixhume ii-eriyali zam, ndiqhagamshele i-USB kwilaptop yam, kwaye ndisemoyeni. Ndonwabe kakhulu yindlela encinci le kit inayo; ezineziciko ezisuswe ematyaleni zinobude obuli-12 ″ kwaye zingena ngokulula kwitafile encinci. Ikhithi incinci ngokwaneleyo ukuba ingadibanisa ngokugqibeleleyo kwisikhululo sam sasekhaya, esenza ukuba kube lula kakhulu ukuqinisekisa ukuba yonke into isebenza ngokukuko ekusebenzeni kwentsimi. Ndonwabile yindlela le kit eyavela ngayo kwaye ndifunde okuninzi apha endleleni, ngakumbi malunga nokuma kwamatyala kunye nokulingana kwamalungu.
Uhlaziyo-Isinxibelelanisi seMakrofoni (ngoFebruwari 2017)
Emva kokusebenzisa iGo Kit Kit yam kwiiveki ezimbalwa ndaqonda ukuba isixhobo sokudibanisa imakrofoni sikaKenwood V71 besingekho kwindawo efanelekileyo. Ikwicala likanomathotholo kwaye xa kusetyenziswa imic iyajikajika kwaye kungenjalo igxininise kwisidibanisi semakrofoni. Ukuphucula le meko ndaye ndagqiba kwelokuba ndongeze uqhagamshelo lwerediyo mic ngaphambili kweGo Kit. Ndiyifezekisile le nto ndisebenzisa intambo ye-ethernet patch yeenyawo enye kunye ne RJ45 Inline Coupler. I-coupler yaxhonywa phezulu kunikezelo lwamandla kunye nomsebenzi onzima wentambo kabini. Olu lungiselelo lutsha lwenza ukuba unxibelelwano ngemakrofoni lufikeleleke ngakumbi kwaye linciphise uxinzelelo kwizidibanisi.
Uhlaziyo -Udityaniso lweBhokisi yaMandla eNtsha (ngoNovemba 2017)
Icandelo lokwakha elitsha lam Ibhokisi leMandla ndibandakanye ukuguqula ukujikeleza kwamandla kwikiti zam zokuhamba. Ngenxa yokuba izixhobo zokutshintsha ibhetri ngoku zikho ebhodini andisayifuni iPWRgate yokulahleka okuphantsi. Endaweni yayo Ndafaka i IPowerwerx PD-4 Ibhloko yokuhambisa. Ndisebenzise kwakhona Powerpole obandayo uqinisa kunye nesiqwenga seplastiki yeABS ukwenza intaba yokukhutshwa kombane wam. Oku kundinika amanqaku amabini aqinileyo oxhulumaniso apho ndinokuthi ndibambe ucingo kwibhokisi yam yamandla. Okanye ukuba ndibaleka ndedwa kunikezelo lwamandla ndingasebenzisa isikipa esilula ekusebenzeni ngokwam.